Otu esi etinye Firefox na-esote (Beta) ma ọ bụ Firefox Quantum (abalị) na Mint Linux - LinuxCapable
Otu esi etinye Firefox na-esote (Beta) ma ọ bụ Firefox Quantum (abalị) na Linux Mint
Monday, November 29, 2021 by Jọshụa James
Firefox na-esote (Beta)
Wụnye FireFox Beta
Wepu Firefox ọzọ wee tụgharịa na Firefox Stable
Firefox Firefox Quantum (abali)
Wụnye FireFox Nightly Mee
Wepụ Firefox Quantum kwa abalị
Mozilla Firefox bụ ihe nchọgharị weebụ efu na mepere emepe nke Mozilla Foundation mepụtara. Firefox na-eji Gecko rendering engine egosipụta ibe weebụ, nke na-emejuputa usoro na ụkpụrụ webụ ugbu a na n'ọdịniihu.
Maka ọtụtụ akụkụ, Firefox na-enwekarị ọhụụ na ntọhapụ kwụsiri ike na Linux Mint na desktọpụ Ubuntu dabere na agbanyeghị, ụlọ anaghị akwụsi ike dị ka beta ma ọ bụ ihe na-agbapụta n'abalị ka enwere ike ịwụnye nwalere njirimara ọhụrụ ma ọ bụ nwalee gị. webụsaịtị tupu ya erute ebe nchekwa kwụsiri ike.
Maka ọtụtụ akụkụ, beta na-ewu bụ ihe ndị ọrụ na-achọsi ike kwesịrị ịdị na-etinye, na ụlọ abalị ekwesịghị iji onye ọ bụla ọzọ karịa sysadmins ma ọ bụ ndị mmepe na-achọ ịnwale otu atụmatụ.
Na nkuzi, ị ga-amụta otu esi etinye ma wụnye beta na arụ ọrụ abalị maka Firefox site na iji PPA nke ndị otu Mozilla na-elekọta.
Nhọrọ nke mbụ na nke kacha akwadoro ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ntọhapụ na-adịghị akwụ ụgwọ bụ ịwụnye ihe nrụpụta beta. Iji mee nke a, ị ga-achọ ibubata ihe ppa: mozillateam/firefox-esote.
Tupu ịmalite, lelee ka ị hụ ihe arụnyere ụdị ihe nchọgharị Firefox.
Ọzọ, mepee ọnụ ụzọ gị (Ctrl+ALT+T) ma gbakwunye Firefox na-esote PPA.
N'adịghị ka Ubuntu, ebe nchekwa ndabere Linux Mint ga-akarị ụdị beta nke ị ga-agbalị ịwụnye na PPA. Ya mere, ị ga-mkpa ịtọlite Ntinye APT.
Mbụ, mepee ma ọ bụ mepụta faịlụ mmasị.
Ọzọ, tinye koodu na-esonụ.
Chekwaa faịlụ CTRL+O, wee pụọ CTRL + X.
Ntọala dị n'elu ga-eme ka ngwugwu Firefox jiri naanị PPA nke ị webatara.
Ozugbo ebubatara, melite ndepụta nchekwa APT gị.
Ugbu a, gbaa mbọ hụ na emechiela mpio ihe nchọgharị Firefox ọ bụla ma mebie iwu a.
Ekwalitela ọbụna na FIREFOX arụnyere. Jiri nhọrọ nkwụnye.
Ozugbo arụnyere, lelee ụdị nke Firefox.
Mepee Firefox wee mepee Enyemaka> Gbasara Firefox iji kwado ụdịdị ahụ.
N'ọdịnihu, ọ bụrụ na ịchọghịzi ka arụnyere beta nke Firefox, buru ụzọ wepụ nrụnye ahụ.
Na-esote, wepụ ihe Firefox na-esote PPA site na-agbakwunye -wepụ Tulee iwu add-apt-repository gara aga.
Ugbu a melite ndepụta nchekwa APT gị iji gosipụta mgbanwe ndị ahụ.
Tinyegharịa ụdịdị Firefox nke ndabara kwụsiri ike.
Ma nke ahụ bụ ya. Ị ewepụla ihe owuwu abalị na desktọpụ Mint Linux gị nke ọma.
Maka ndị ọrụ na-agaghị achọ iji abalị ọzọ, ị nwere ike wepu faịlụ mmasị. Rịba ama, enwere ike ịhapụ nke a karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye beta PPA ma nwalee Firefox Next (Beta) n'ọdịnihu.
Maka ndị ọrụ nwere APT Pinning maka ngwungwu ọzọ, wepụ ntụtụ ngwugwu Firefox.
Nhọrọ nke abụọ maka ndị na-achọ ịnwale onye nrụpụta ihe na-agba ọbara nke Firefox, nke a na-akpọ Firefox Quantum Nightly, ị ga-achọ itinye ya na ụlọ ọrụ ahụ. ppa: ubuntu-mozilla-dayly/ppa. Otu uru maka ụlọ ndị a na-ewu kwa abalị bụ nke ahụ Awụnyere Quantum Firefox dị iche na ụlọ kwụsiri ike yana beta na-ewuli elu.
Mbụ, mepee ọnụ ụzọ gị (Ctrl+ALT+T) ma gbakwunye Firefox Quantum kwa abalị Mee.
Akara ngosi Firefox Quantum Nightly ga-adị iche na akara ngosi Firefox nke nwere aha pụrụ iche Ihe nchọgharị weebụ nke abalị.
Ọmụmaatụ na menu ihe ngosi ngwa:
Ọmụmaatụ mgbe emepere ya:
Na-esote, wepụ ihe Firefox Quantum abalị PPA site na-agbakwunye -wepụ Tulee iwu add-apt-repository gara aga.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Firefox Next (Beta) yana Firefox Quantum (Nightly) na-ewuli na desktọpụ Mint Linux gị. Cheta, ka ị na-anwale njirimara ọhụrụ na-atọ ụtọ, ha na-abụkarị ndị na-adịghị akwụsi ike na obi abụọ adịghị ya na ha nwere ụfọdụ ahụhụ nwere ike ịkpata nsogbu nchekwa.
Beta ga-abụ nzọ kacha mma maka nkezi onye ọrụ ike ịwụnye ma hapụ ndị ọkachamara ụdị Quantum.
Otu esi etinye Firefox na-esote (Beta) ma ọ bụ Firefox…
Wụnye ihe nchọgharị Firefox na OS 6.0/6.1
Categories Mint Linux Tags Firefox Nchọgharị Mail igodo
Otu esi etinye MySQL 8.0 na Rocky Linux 8